Nigeria:- Dablay Hubaysan Oo Ugu Yaraan 65 Qof Ku Toogatay Dad Ku Guda Jiray Aas - Borama News Network boramanews.com
Nigeria:- Dablay Hubaysan Oo Ugu Yaraan 65 Qof Ku Toogatay Dad Ku Guda Jiray Aas
Ugu yaraan 65 qof ayaa la sheegay iney dileen dableey looga shakiyey iney ka tirsan yihiin ururka Boko Haram oo rasaas ku furay dad aas ku guda jiray gobolka Borno oo ku yaalla waqooyi-bari ee dalka Nigeria.
Dableeyda weerarka ka geystay tuulo ku dhow casimadda gobolka Borno ee Maiduguri, ayaa watay mootooyin iyo gawaari sida ay sheegeen dad dhacdadaasi goob joog u ahaa.
Tiro ka mid ah dadki aaskaasi ka qayb qaadanayey ayaa la sheegay iney halkaasi ku dhinteen, halka qaarkoodna ay u dhinteen iyaga oo isku dayaya iney ka hortagaan dableyda weerarka soo qaadday.
Bariyahan dambe waxaa gobolkaasi ku soo badanayey weerarrada ay geystaan kooxaha islaamiyiinta ee halkaa ka dagaallama.
Muhammed Bulama oo ka mid ah mas’uuliyiinta gobolka ayaa wuxuu sheegay weerarkan ugu dambeeyey iney Boko Haram u soo qaadday si ay ugu aarsato 11 dabley oo kooxdaasi ka tirsan oo tuulada ay weerarka ku soo qaadeen looga dilay laba toddobaad ka hor.
Qulqulatooyinka dalka Nigeria ka dhacayey 10-kii sano ee la soo dhaafay waxaa lagu dilay toabeneeyo kun oo qof halka ay guriyahooda ka qaxeen dad ka badan 2 milyan oo qof.
Boko Haram, oo lagu micneeyo “Waxbarashada reer galbeedka wa xaaraam” waxay u ololeeyaan Islaamka inuu mamnuucay in laga qayb qaato dhaqdhaqaaqyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada xiriirka la leh reer galbeedka. Kooxda ayaa waxay u dagaallameysaa iney dowladda Nigeria ka takhalusaan oo ay abuuraan dowlad Islami ah.
Ururka Boko Haram kama dhaqdhaqaaqa oo keli ah Nigeria wuxuu sida oo kale uu ka dhaqdhaqaaqaa waddamada dariska la ah sida Chad, Niger iyo Cameroon.
Boko Haram waxay soo caan baxday oo ay warbaahinta caalamka soo jiidatay 2014-kii marki dugsi ku yaallo magaalada Chibok ee gobolka Borno oo ay kooxda si aad ah uga dhaqdhaqaaqdo ay ka afduubteen 300 oo gabdhood oo dugsigaasi wax ka baraneysay.
Machadka Dhaqaalaha iyo Nabadda sanaddi 2015-kii kooxda Boko Haram wuxuu ka dhigay ururka ugu waxyeellada badan kooxaha uu machadku ku sheegay argagixisada ee caalamka ka dagaallama.
Deegaannada kooxda gacanta ugu jira ayaa sanadihi ugu dambeeyey hoos u dhacayey maadaamaa ururka dhexdiisa ay kala qaybsnaan ka dhalatay.
Si kastaba ha ahatee, kooxaha islaamiyiinta weli deegaankaasi wey ka dhaqdhaqaaqaan, iyada oo ciidamada dalkaasina ay dadaal ugu jiraan sidi ay kooxdaasi u soo fajari lahaayeen.
DAAWO: Madaxwaynaha Maamulka Punland Oo Kulan La Qaatay Laamaha Amniga Puntland Kuna Amaray In La Adkeeyo Amniga Puntland
DAAWO: Khilaafka Ahlu Suna Iyo Dawlada Fadaraalka Oo Sii Xoogaystay Iyo Diyaarada Laga Celiyay Dhuusamareeb
DAAWO: Xildhibaan Bokhaari Oo U Jawaabay Gudoomiye Xigeenka Golaha Wakiilada Somaliland Axmed Yasiin Sh. Cali Ayaanle
Bnnstaff Bnnstaff July 31, 2019